Nagarik Shukrabar - सेक्स त राति नै गर्न मनपर्छ
शुक्रबार, १९ माघ २०७४, ०५ : ३६ | शुक्रवार
ज्योति मगर, गायिका/मोडल
कुन उमेरको मान्छे बढी सेक्सी लाग्छ ?
उमेर जति पनि हुनसक्छ, मन भने मिल्नुपर्यो ।
सेक्सी लाग्ने नायक ?
सौगात मल्ल सेक्सी लाग्छ ।
आफूसँग १०० मा कति प्रतिशत सेक्स पावर छ भन्ने लाग्छ ?
७५ प्रतिशत ।
कस्तो स्थानमा सेक्स गर्न मन लाग्छ ?
ठ्याक्कै यहीँ भन्ने हुन्न । समय र परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ ।
कस्तो समय बढी रुचाउनुहुन्छ ?
मलाई सेक्स त रातिको समयमै मनपर्छ ।
सेक्ससम्बन्धी ज्ञान लिन के गर्नुहुन्छ ?
साथीहरुसँग कुरा गरेर नै हो ।
तपाईंको विचारमा नेपालीहरुलाई कत्तिको सेक्स गर्न आउँछ ?
मज्जाले आउँछ । सेक्स मात्र भन्ने हुँदैन, त्यहाँ माया पनि मिसिएको हुन्छ ।
मान्छेहरुलाई कति उमेरसम्म वैंशले छुन्छ होला ?
यतिउति भन्ने हुँदैन । तर यति भने हो, मान्छेको उमेर जति बढ्दै जान्छ, त्यति सेक्स पावर घट्दै जान्छ ।